पुजा र आकाशको ‘मन परेसी पर्यो पर्यो’मा प्रशान्तको इन्ट्री
काठमाडौं – ‘जय शम्भु’ फेम्ड निर्देशक रुपेश थिङ तामाङले निर्देशनमा निर्माण हुने सिनेमा ‘मन परेसी पर्यो पर्यो’मा हाण्डसम भिलेन प्रशान्त ताम्रकारको इन्ट्री भएको छ । सिनेमाको मुख्य भुमिकामा यसअघि नै निर्माण टिमले अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री पुजा शर्मालाई अनुबन्धित गरिसकेको थियो । आगामी माघ ७ गतेबाट छायाँकन थालिने सिनेमा अर्को वर्ष प्रदर्शनमा आउनेछ । सिनेमामा प्रशान्तलाई नेगेटिभ अवतारमा देख्न सकिनेछ ।
‘रामकहानी’मा पहिलो पटक एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेका पुजा र आकाश पाचौँ पटक मन परेसी पर्यो पर्योमा सहकार्य गर्दैछन् । रामकहानी बक्सअफिसमा असफल भए पनि उनीहरुको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाए । यसपछि यी दुईको सहकार्य सिनेमा ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’मा भएको थियो । उक्त सिनेमा हालसम्म पनि प्रदर्शनमा आउन सकेको छैन् ।
गएको कात्तिकमा आकाश र पूजा अभिनीत तेस्रो सिनेमा ‘पोइ पर्यो काले’ प्रदर्शनमा आएको थियो । उक्त सिनेमा रिलिज लगत्तै दुईले सिनेमा ‘सम्झना विर्सना’को छायाँकन सकाएका छन् । यसबीच, पुजा र आकाशको जोडी पुनः एक नयाँ सिनेमामा दोहोरिने भएको हो । रघु परियारले निर्माण गर्न लागेको सिनेमा ‘मन परेसी पर्यो पर्योे’को छायाँकन केहीदिनमा उनीहरुले सुरु गर्दैछन् । हाल सिनेमाको प्रि-प्रोडक्सनको काम चलिरहेको छ ।
सिनेमामा बुद्धि तामाङ, किरण श्रेष्ठ, कालु राना, सन्ध्या बुढाको पनि अभिनय रहनेछ । फोर्थ आइज् मुभीज प्रालि र डिविआर मिडियाको ब्यानरमा निर्माण हुने सिनेमालाई करण श्रेष्ठ क्रेजीले वितरण गर्दैछन् । चितवन र कालिञ्चोकमा छायांकन हुने ‘मन परेसी पर्यो पर्यो’मा अर्जुन पोखरेल, पुरुषोत्तम न्यौपाने र श्रीकृष्ण बर्देवाको संगीत र रविन शाहले कोरियोग्राफी गर्नेछन् । निर्देशक तामाङ सिनेमा पुर्ण रुपमा प्रेमकथामा आधारित रहेर निर्माण हुने बताउँछन् ।
नेहा कक्कड र आदित्यनारायण झाको विवाहको वास्तविकता
महेश बाबुको नयाँ सिनेमाले बक्सअफिसमा कमायो एक सय पचास करोड
कात्तिक र साराको लभस्टोरी ‘लभ आज कल’ ट्रेलर रिलिज
बिना प्रचार-प्रसार रिलिज भयो अस्मिता र अभिषेकको ‘१२ सत्ताईस’
दरबार मार्गमा सुमितको ‘लुक्स युनिसेक्स ब्युटी पार्लर’ संचालनमा
निफको तेस्रो संस्करणको लागी नेपाल आउँदै बलिउड निर्देशक प्रकाश झा
अमेरिकामा अल्लू अर्जुनको सिनेमाले तोड्यो ‘बाहुबली’ को रेकर्ड
स्ववियु निर्वाचनमा सम्भावित उम्मेदवार, कस–कसको नाम पर्यो ?
प्रहरीलाई तथानाम गाली गरेपछि गायिका आस्था राउत विवादमा
हत्याको आरोपमा श्रीमान् र सासु–ससुरा जेलमा, जिउँदै फर्किइन् श्रीमती
तिङ्लामा तनाव: प्रहरीले हवाई फायर गर्‍यो, दर्जन बढी सवारीमा आगजनी
श्रीमती बलात्कारको आरोपमा श्रीमान पक्राउ
हिमपहिरोमा हराएका पर्यटक खोज्न कोरियन दूतावासले पठायो हेलिकप्टर
शीतलनिवासको यस्तो गल्ती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल!
दिनसम्म विष खुवाएर श्रीमानको हत्या